Avereno jerena i Xiaomi Mi A1 mpanjaka vaovao an'ny Android midadasika | Androidsis
Xiaomi Mi A1 famerenana
Manodidina ny roa ambin'ny folo andro eo ho eo izay hatramin'ny namoahanay ny unboxing an'ny Xiaomi Mi A1, famoahana ny vokatra izay nanaovako fanoloran-tena taminareo rehetra hitondra ny famerenana an-tsarimihetsika feno ny terminal izay tato am-bavan'ny olona rehetra.
Izany no antony anasako androany manasa anao hanatrika izany famerenana horonantsary feno sy feno an'ny Xiaomi Mi A1, ary lazaiko fa be dia be hatramin'ny nitondrako horonan-tsary mihoatra ny 30 minitra ny halavany, izay anazavako amin'ny antsipiriany ny hery sy ny fahalemen'ny Xiaomi Mi A1 rehetra, (ity fanisana ity fa nanana na dia nisy teboka malemy ity terminal ity), satria ny Xiaomi Mi A1 no fitaovana Android nantsoina mba ho terminal farany amidy indrindra eo amin'ny elanelam-potoana.
1 Famaritana ara-teknika momba ny Xiaomi Mi A1
2 Horonantsary unboxing an'ny terminal natao tamin'ny 24 Oktobra
3 Izay rehetra omen'ny Xiaomi Mi A1 anay
3.1 Famaranana sy famolavolana
4 Rafitra fandidiana
4.4 Mpamaky ny dian-tànana any aoriana
Famaritana ara-teknika momba ny Xiaomi Mi A1
modely My A1 Global Version
Operating System Android One 7.1.2 tsy misy sosona fanaingoana
efijery 5.5 "LTPS LCD miaraka amina vahaolana FullHD 400 dpi ary fiarovana Gorilla Glass 5
processeur Qualcomm Snapdragon 625 miaraka amin'ny teknolojia Octa Core 64 Ghz 2.0-bit
GPU Adreno 506 hatramin'ny 650 Mhz
Tahiry anatiny 64 Gb miaraka amin'ny fanohanan'ny MicroSD hatramin'ny 128 Gb
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsarimihetsika Dual 12 + 12 mpx miaraka amina aperture 2.2 sy 2.6 tsirairay avy - zoom optika 2X - Dual LED Flash - Detection phase post autofocus - HDR - fandraisam-peo video 4K -
Fakan-tsary aloha 5 mpx misy maody hatsaran-tarehy sy fandraketana horonantsary Full HD
Conectividad Dual SIM Nano SIM na Nano SIM + MicroSD - Bandana 4G FDD-LTE: 1/3/5/7/8/20 -TDD-LTE Bands: 38/40 - 3G WCDMA Bands: 1/2/5/8 - 2G GSM: Bands 2/3/5/8 - Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 Ghz sy 5 Ghz - Bluetooth 4.2 A2DP - GPS misy fanohanana A-GPS sy GLONASS - Radio FM - OTG - OTA -
Fitaovana hafa Fampandrenesana notarihina - Mpamaky ny dian-tanan-damosina ao aoriana izay toa tsara - Vatan'ny unibody namboarina tamin'ny vy - USB TypeC - Fandoavam-bola haingana - Fanavaozana ny fiarovana Google - Azo havaozina amin'ny Android Oreo -
bateria 3080 mAh tsy azo esorina
lafiny X X 155.4 75.8 7.3 MG
vidiny 193.67 Euros
Horonantsary unboxing an'ny terminal natao tamin'ny 24 Oktobra
Izay rehetra omen'ny Xiaomi Mi A1 anay
Mikasika ny famaranana sy ny famolavolana ny Xiaomi Mi A1, ny marina dia na dia tsy iray amin'ireo terminal manintona indrindra amin'ny taona aza izy io amin'ny resaka terminal misy efijery rehetra na zavatra toy izany izay lamaody ankehitriny, ny marina dia fa Io dia terminal tena manintona tokoa raha jerena, izay manana ny sasany amin'ireo famitana premium indrindra amin'ny aliminioma anodized, ary amin'ny ankapobeny io loko mainty matte io dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo terminal tsara indrindra izay nahafinaritra ahy ny nosedraina manokana.
Amin'ny fanamboarana, ny famaranana ary ny fitaovana ampiasaina, dia aseho fa mamoaka kalitao amin'ny lafiny efatra izy, izay hitantsika amin'ny alàlan'ny fanesorana azy avy ao anaty boaty fotsiny ary hitehirizantsika azy eny am-pelatanantsika. Famaritana iray izay manana refy marina mba ho terminal azo zakaina tokoa satria mifanaraka tsara amin'ny tanantsika io noho ny bezela miolakolaka sy ny metaly miavaka sy mangatsiaka.
Raha ny amin'ny efijery an'ny Xiaomi Mi A1 dia manana a Tontonana teknolojia IPS miaraka amin'ny vahaolana feno HD sy ny hakitroky ny pixel 401 dpi izay manome antsika traikefa mpampiasa tena tsara dia tsara amin'ny haavon'ny terminal misy ambaratonga avo kokoa noho io Mi A1 io. Manome ohatra azo ampiharina, Ny efijery an'ity Xiaomi Mi A1 ity dia amin'ny ambaratonga mitovy amin'ny efijery an'ny BQ Aquaris X Pro, terminal iray izay efa ho avo roa heny amin'ny vidin'ity Xiaomi Mi A1 ity.
Mikasika ny fikitika azy na ny valin'ny tactile, ny marina dia izy io dia iray amin'ireo efijery tsara indrindra azontsika jerena ao amin'ny terminal iray amin'ny vidiny mihetsika ity Xiaomi Mi A1 ity. Sarimihetsika misy famirapiratana avo noho ny ampy mba hahafahana mampiasa ivelany tsara na dia milatsaka aminy aza ny tara-masoandro mivantana.
Raha ny famirapiratana farafahakeliny, ity Xiaomi Mi A1 ity dia manana haavo hazavana farafahakeliny izay ho ahy dia iray amin'ireo terminal izay ahitako azy ambany indrindra, mety indrindra rehefa amin'ny alina isika no mampiasa ny smartphone ao am-pandriana alohan'ny hatory. tsy manelingelina olona ary tsy manimba ny fahitanay.
Ny fiarovana azy Corning Gorilla Glass dia manao manohitra manokana ireo rangotra kely ireo amin'ny fampiasana isan'andro, ary ambonin'izany rehetra izany, arovan'izy ireo amin'ireo dian-tànana be loatra izay hitantsika eo amin'ny efijerin'ny terminal Android hafa ao anatin'ity elanelam-bidim-bidy ity izay, aorian'ny fampiasana azy ireo mandritra ny minitra vitsy dia tsy maintsy diovintsika tsy tapaka izy ireo satria lasa tena, tena manelingelina. Amin'ity tranga ity, androany isika dia miresaka amin'ny efijery Xiaomi Mi A1, dia toa nisy karazana fitsaboana fanoherana ny rantsan-tànana hatramin'ny Izy io dia iray amin'ireo efijery izay mamandrika ny loto, ny vovoka ary ny dian-tànana kely indrindra amin'ny fampiasana isan'andro.
Mikasika ny rafitra fiasa dia miatrika a Android Nougat 7.1.2 kinova madio tanteraka sy miaraka amin'ny fanavaozana Google Pixel. Andiany Android AOSP izay hahitantsika ny masonay amin'ny alàlan'ny rindranasa Xiaomi roa, fampiharana antsoina hoe vondrom-piarahamonina ary ny rindrambaiko fanaraha-maso Xiaomi antsoina hoe Mi Remote.
ny sasany fanavaozana ny vaovao sy azo antoka nandritra ny fotoana ela, na ny fanavaozana isam-bolana ny patch fiarovana Android, ary koa ny fanavaozana mba hanitsiana ireo lesoka kely sy hamahana ny olan'ny Android, ary koa ireo fanavaozana lehibe ho an'ny Android vaovao.
Amin'ity farany ity dia miandry an'ity isika Xiaomi Mi A1 dia iray amin'ireo terminal tsy Google Android voalohany nanavao ny kinova farany an'ny Android 8.0 na Android Oreo. Izany no nahatonga ahy nanao batemy azy tamin'ny anaram-bosotra hoe «Xiaomi Nexus».
Raha mijery akaiky ireo masontsivana ara-teknika nametrahako anao teo amin'ny latabatra ambonin'ireto andalana ireto isika dia afaka mahita fa tsy misy dikany ity Xiaomi Mi A1 ity fa izy io dia manana processeur Snapdragon 625, mpiorina Octa 64-bit Core amin'ny 2.0 Ghz ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro farany izay, miaraka amin'ny Adreno 506 GPU, ny 4 Gb an'ny LPDDR4 RAM ary ny fitehirizam-bolany 64 Gb miaraka amin'ny tohana ho an'ny MicroSD hatramin'ny 128 Gb hafa manana fahaizana ambony indrindra, dia manolotra anay izay rehetra mety ilain'ny mpampiasa Android antonony isan'andro isan'andro.
Fitaovana iray raha toa ka hampitahaintsika amin'ireo maodely hafa eo amin'ny tsena ankehitriny isika dia afaka mahita azy ao ireo terminal izay manodidina ny 300/350 Euros amidy amin'ny besinimaro.
Raha eo amin'ny fifandraisana dia manana terminal izay manana ny zava-drehetra izy, manana Wi-Fi 2.4 Ghz sy 5 Ghz, Bluetooth 4.2, GPS ary aGPS GLONASS, OTG. Ny hany zavatra tsy haintsika dia ny fifandraisana NFC izay indrisy tsy misy an'ity terminal Android ity, ankoatr'izay tsy manana radio FM, fampiasa iray izay ankehitriny dia mbola maro ny mpampiasa Android mangataka sy mitaky izany.
Raha tsy izany dia manana ny tarika 20 800 Mhz nangatahina sy nangataka izany Mikasika ny fifandraisana 4G LTE any Espana dia hotompoina tsara isika amin'ny fotoana rehetra.
Mikasika ny feo natolotr'ity Xiaomi Mi A1 ity, na dia tsy eo amin'ny ambaratongan'ny terminal Android avo lenta aza izany, izay tsy mila takianay amin'ny terminal any amin'ity elanelam-bidin'ity ihany koa, ny marina dia dingana iray na roa alohan'ny terminal izay azoko natao ny nanandramana ity fizarana vidiny ity ary na dia somary lafo kokoa aza.
Manana izany isika haavon'ny herinaratra mihoatra ny marina izay misy ny feo mivoaka avy ao amin'ilay mpandahateny tokana misy eo amin'ny farany ambany amin'ny terminal eo ankavanan'ny mpampitohy USB Type-C, dia feo tena mazava be, mazava be fa tsy miolakolaka na dia mametraka ny habeny amin'ny ambony indrindra amin'izay avelan'ny rafitra aza isika.
Mpamaky ny dian-tànana any aoriana
Raha ny mpamaky ny dian-tànana izay ao ambadiky ny terminal, lazao aminao fa ny lafy ratsy azoko apetraka dia io ihany no hita ao aorian'ny faran'ny terminal fa tsy eo aloha satria izaho dia be kokoa mpamaky ny rantsantanana amin'ny bokotra Home. Ho an'ny ambiny dia eo alohanay isika iray amin'ireo mpamaky sidina tsara indrindra izay efa nanandrana tamin'ny terminal Android, na dia mihoatra ny fahombiazany na farafaharatsiny mitovy amin'ny mpamaky rantsantanana mahagagan'ny LG G6-ko.
Mpamaky rantsantanana izay ankoatran'ny aza mandiso na oviana na oviana na mametraka ratsy ny rantsan-tànanao eo aminy ianaoManolotra antsika fiasa fiasa ihany koa izy io, amin'ny alàlan'ny fidinana indray mandeha, hamelatra ny lambam-baravarana hahitana ireo fampandrenesana miandry fa tsy tokony hikasika ny efijery Xiaomi Mi A1. Amin'ny alàlan'ny fametahana ny rantsan-tananao fanindroany, fidirana amin'ny Toogles amin'ilay ridao fampandrenesana, ary farany, mihetsiketsika, akatona indray ilay ridao fampandrenesana nefa tsy nikitika ny efijery Xiaomi Mi A1 na oviana na oviana.
Mikasika ny bateria mitambatra sy tsy azo esorina amin'ity Xiaomi Mi A1 ity, bateria 3080 mAh izay manana efijery misy vahaolana Full HD, dia nanome isa vitsivitsy izay tena tsara. Ity dia nanome ahy fahaleovan-tena izay nihoatra ny andro nampiasana tamin'ny isa izay manodidina ny 6 ora ny efijery mavitrika, miaraka amin'ny haavo famirapiratana faran'izay betsaka sy ny fifandraisana rehetra azo atao amin'ny fotoana rehetra.
Manana koa rafitra fanamafisam-peo haingana izay ao anatin'ny adiny iray sy sasany mahery dia hanana ny terminal fenoina tanteraka isika manomboka amin'ny haavon'ny batterie 5%.
Koa satria ny sary iray mitentina teny an'arivony azoko resahina, eto ambony etsy ambony dia avelako ho anao ny fitsapana fakan-tsary mahazatra izay matetika ataontsika amin'ireo terminal izay dinihintsika eto amin'ny Androidsis. Fitsapana fakan-tsary izay ahitantsika ny kalitaon'ny fakan-tsary 12 + 12 mpx aoriana ary ny kalitaon'ny fakan-tsary 5 mpx eo aloha.
Ireo horonam-peo roa ireo dia vita tamin'ny kalitao Full HD nefa tsy namboarina Ary koa amin'ny faran'ny horonantsary, alohan'ny hanehoako anao ny sary andrana dia avelako ho anao segondra vitsy amin'ny firaketana horonantsary miadana, (Slow Motion) an'ny Xiaomi Mi A1.
Ny hany lesoka azoko nalaina na napetraka tamin'ireny fakantsary Xiaomi Mi A1 ireny dia ny tsy nanampian'izy ireo stabilizer sary optika mba tsy hohozongozona ilay rakipeo.
Mpamaky rantsantanana manaitra
Fanavaozana azo antoka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Xiaomi Mi A1 famerenana
Amin'ny farany dia tsy manana satria tsy manana Radio FM ianao. Tsy tantera-drano koa izy io.
Nieritreritra ny hividy azy hisolo ny Sony Xperia Z3 aho, fa ireo zavatra ireo ankoatry ny tsy fananany NFC no mahatonga ahy miandry olona hafa hanana azy.
Trondro mpihaza trondro dia hoy izy:
Fanazavana. Toa raha manana Radio FM ianao fa tsy ampandehanana ary satria tsy misy fampiharana apetraka izao hihainoana azy dia tsy manana fidirana mivantana isika.
Amin'ny internet dia efa misy fikafika hampandehanana ny onjam-peo, raha liana amin'ny fikarohana azy ao amin'ny Google ianao dia tsy afaka nanandramako mivantana izany dia holazainao amiko.
Ampandehano ny radio FM amin'ny Xiaomi Mi A1
Raha te hampihetsika ny radio FM dia mila manaraka dingana tsotra be isika:
Manokatra ny dialer (na dialer) izahay ary miantso ny kaody * # * # 6484 # * # *
Rehefa voamarika ny kaody dia midina amin'ny menio fanandramana isika ary tsindrio ny safidy 32. Radio FM.
Valiny ho an'ny Fishpeter
Manana toerana faharoa ve ianao ???
mila manao dika mitovy fampiharana ve ianao ???
Tolotra 3 tsy hay tohaina momba ny geekbuying hankalazana ny 11.11, Andro mpitovo ao Shina
Ny Honor V10 dia haseho amin'ny 5 Desambra